Posted by Tranquillus | Jan 6, 2021 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Toy ny fitsipika ankapobeny, ny habetsaky ny vola napetraka ao amin'ny drafitry ny tahiry ataon'ny mpiasa anao dia aorian'ny 5 taona farafaharatsiny. Na izany aza, toe-javatra sasany avelao ianao hisintona aloha ny rehetra na ny ampahany amin'ny fanananao. Fanambadiana, fahaterahana, fisaraham-panambadiana, herisetra an-tokantrano, fisotroan-dronono, fahasembanana, fividianana fananana, fanavaozana ny trano fonenana lehibe, trosa be loatra, sns. Na inona na inona antonyo dia tsy maintsy mangataka fangatahana famotsorana ianao. Jereo ato amin'ity lahatsoratra ity ireo hevitra rehetra tadidio amin'ity fizotrany ity.
Rahoviana ianao no afaka mamaha ny drafitry ny tahirin'ny mpiasa anao?
Araka ny lalàna manan-kery dia tsy maintsy miandry fe-potoana 5 taona ianao vao afaka misintona ny fanananao. Mikasika ny PEE sy ny fandraisana anjaran'ny karama izany. Azo atao ihany koa ny manaisotra ny tahirim-bolanao eo noho eo, raha PER na PERCO izany.
Noho izany, raha mila anao ny toe-javatra maika. Azonao atao ny manomboka ny dingana iray hamoahana ny tahirin'ny mpiasa na dia talohan'ny fe-potoana nifanarahana aza. Amin'ity tranga ity dia famotsorana aloha na fanonerana aloha. Noho izany dia tsy maintsy manana antony marim-pototra ianao. Aza misalasala manao fikarohana mba hanamarinana izay antony heverina fa ara-dalàna amin'ity karazana fangatahana ity.
Torohevitra azo ampiharina
Voalohany indrindra, zava-dehibe ny hamaritana tsara ny tranga famotsorana aloha izay manahirana anao. Ary koa ny valopy izay ampiarahina aminy: PEE, Perco na PER iraisana. Avy eo, tsy maintsy manomboka ny fangatahanao famotsorana aloha ianao mifanaraka amin'ny fe-potoana napetraka.
Fantaro fa manokana ny rakitra tsirairay. Ilaina tokoa ny mampahafantatra mialoha ny momba anao mialoha momba ireo fepetra isan-karazany apetraka amin'ny fifanarahana nataonao. Aza adino ny mitondra singa manaporofo ny maha ara-dalàna ny fangatahanao. Apetaho amin'ny mailakao ny antontan-taratasy iray na maromaro. Hataonao eo anilanao ny vintana rehetra hahazoana fifanarahana famotsorana aloha. Ny toe-javatra tsirairay dia mitaky porofo marimarina: taratasy fanamarinana ara-panambadiana, boky firaketana momba ny fianakaviana, taratasy fanamarinana tsy fahatanterahana, taratasy fanamarinana ho faty, fanamarinana famaranana ny fifanarahana sns
HAMAKY Taratasy santionany hiadiana amin'ny garnishment karama
Alohan'ny handefasanao ny fangatahanao dia aza hadino ny manamarina ny vola tianao halefa. Raha ny marina dia tsy manan-jo hangataka fandoavam-bola faharoa ianao noho io antony io ihany. Amin'ity tranga ity dia mila miandry ianao mandra-piverin'ny volanao.
Taratasy fangatahana famoahana ny drafitry ny tahiry ho an'ny mpiasa
Ireto misy santionany taratasy azonao ampiasaina mba hamaha ny tahiry karamao.
Ohatra 1 ho an'ny fangatahana famotsorana aloha ny drafitry ny tahiry ho an'ny mpiasa
Laharana fisie :
Adiresy voasoratra anarana
Kaody kaody sy tanàna
[Toerana], amin'ny [Daty]
Amin'ny alàlan'ny taratasy voasoratra anarana miaraka amin'ny fanekena ny fahazoana azy
Lohahevitra: Fangatahana famotsorana aloha ny tahirin'ny mpiasa
Napetrako tamin'ny serivisy ho an'ny orinasanay ny fahaizako hatramin'ny (datin'ny fandraisana mpiasa) toy ny (toetran'ny toerana misy anao).
Manolotra fangatahana famoahana aloha ny tahirim-bolan'ny mpiasako aho. Ny fifanarahana nataoko dia voasoratra anarana amin'ireto fanondroana manaraka ireto: lohateny, isa ary toetoetran'ny fifanarahana (PEE, PERCO…). Te-hisintona (ampahany na rehetra) ny fananako aho, izany dia (vola).
Raha ny tena izy (hazavao fohifohy ny anton'ny fangatahanao). Mandefa anao miraikitra aho (lohatenin'ny porofoo) hanohana ny fangatahako.
Miandry valiny izay antenaiko fa tsara avy aminao, azafady, Ramatoa, ny fanehoana ny arahaba feno fanajana.
Ohatra 2 ho an'ny fangatahana famotsorana aloha ny drafitry ny tahiry ho an'ny mpiasa
Laharana fisoratana anarana:
Lohahevitra: Taratasy famotsorana aloha ny fandraisan'anjaran'ny mpiasa
Ny mpiasa hatramin'ny (datin'ny karama) ao amin'ny orinasanao amin'ny (toerana notazonina), dia mahazo tombony amin'ny drafitry ny tahiry ho an'ny mpiasa tiako halefa (feno na ampahany).
Eny tokoa (hazavao ny antony manosika anao handefa ny fangatahanao ny fanakanana: fanambadiana, famoronana orinasa, olana ara-pahasalamana sns.). Mba hanamarinana ny fangatahako dia andefasako ho lampiranana (lohatenin'ny antontan-taratasy manohana) ianao.
Miangavy aho ny famoahana (vola) amin'ny fananako (aza adino ny mamaritra ny toetran'ny drafitry ny tahirinao).
Amin'ny fanantenana fifanarahana haingana avy aminao, dia raiso, Tompoko, ny fanehoana ny veloma indrindra.
Torohevitra vitsivitsy amin'ny fanoratana ny taratasy fangatahana
Taratasy ofisialy natao hamoahana ny ampahany na ny fandraisan'anjaran'ny mpiasa ao amin'ny kaontinao. Ny atin'ny taratasy dia tokony ho marina sy mivantana.
HAMAKY Manoratra tsara, fahaizana tena ilaina!
Ambonin'ny zavatra rehetra, alao antoka fa ny antontan-taratasinao manohana dia manantena ny valiny tsara. Lazao ihany koa ny toerana tazominao ao anatin'ny orinasa ary farito ny lisitry ny mpiasa raha manana ianao.
Vantany vao vonona ny taratasinao. Azonao atao ny mandefa azy amin'ny alàlan'ny mailaka voasoratra anarana miaraka amin'ny fanekena ny fahazoana azy mivantana amin'ny andrim-panjakana mitantana ny tahiryo. Ho an'ny orinasa sasany dia misy ny fisoratana anarana takelaka fangatahana alaina amin'ny sehatra an-tserasera amin'ny endrika PDF.
Mariho ihany koa fa ny fangatahanao dia tsy maintsy apetraka ao anatin'ny 6 volana manomboka ny datin'ny hetsika mamela ny famotsorana.
Ny fetran'ny fotoana hamahana ny vola
Tokony ho fantatrao fa ny famindrana ny vola nangatahina dia tsy hatao eo noho eo. Miankina amin'ny masontsivana marobe, toy ny teny amin'ny fangatahana, ny ora fandefasana ny taratasy, sns.
Ny fe-potoana famoahana koa dia miankina amin'ny fahita matetika amin'ny fanombanana ny vola ampiasana ny teti-bolanao. Ny fikajiana ny sandan'ny sandan'ny haren'ny orinasa iraisana dia azo atao isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, am-telovolana na isam-bolana. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, isan'andro ity fizarana ity izay ahafahana mamoaka ny vola ao anatin'ny fotoana fohy.
Raha vantany vao ekena ny fangatahanao manafoana dia tokony homena kaonty ao anatin'ny 5 andro fiasana ny kaontinao.
Sintomy ny "Ohatra-1-ho-ny-famoahana-aloha-fangatahana-ho an'ny mpiasa-tahiry.docx"	Ohatra-1-ho-fangatahana-ny-hanakanana-miandry-ny-son-epargne-salariale.docx - Notsongaina in-2849 - 15 Kb
Sintomy ny "Ohatra-2-ho-ny-famoahana-aloha-fangatahana-ho an'ny mpiasa-tahiry.docx"	Ohatra-2-ho-fangatahana-ny-hanakanana-miandry-ny-son-epargne-salariale.docx - Notsongaina in-2779 - 15 Kb
Modely taratasy: sokafy ny tahirin'ny mpiasao January 8th, 2022Tranquillus
Teo alohaLisitra manokana ao amin'ny Excel 2010
manarakaToro-kazo taratasy hanaiky na handà ny fifandanjana amin'ny kaonty rehetra